1.Nahoana no mifidy ny vokatry ny orinasanao izahay?
YUFA dia natsangana tamin'ny 1987, traikefa 30 taona mahery. Manana ny fahaiza-manao R&D eny an-tsena isika, miaraka amina foibe R&D dimy sy toby famokarana telo, fatana famolavolana nomerika 17 mandeha ho azy tanteraka, lafaoro rotary 2, kilao tionelina 1 ary kilasy fanosehana lovia 1, miaraka amina famokarana 250,000 taonina.
2.You dia mpanamboatra na orinasa mpivarotra?
YUFA dia tena mpanamboatra, tsy vitan'ny hoe manome ny vokatra avo lenta miaraka amin'ny vidiny tsara indrindra, fa afaka manolotra serivisy mialoha sy fivarotana tsara indrindra koa aorian'ny asa fanompoana.
3. Inona no karazana vokatra azonao atolotra?
Ny vokatrao lehibe dia misy ny alumina mifangaro fotsy avo, ny alumina mifangaro fotsy ambany sosa, ny alumina mifangaro ao anaty, ny corundum kristaly tokana, ny spinina alumina-magnesia, ny α-alumina, ny vovobony granulina alumina, ny keramika alimina ary ny karazany 300 mihoatra ny andiany valo.
Ary manome vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa ambony amin'ny sehatra maro izahay, toy ny abrasives, temperaturematerial avo, seramika alimina, fonosana anti-harafesina, vera LED, mpameno herinaratra, fikosoham-bolo ary famolahana ary fitaovam-pandrefesana ara-nofo.
4.Can afaka manome santionany ny orinasanao sa afaka mitsidika ny ozinanao izahay?
Mazava ho azy, manome santionany maimaim-poana izahay, ary tongasoa anao hitsidika ny ozininay amin'ny fotoana rehetra.
5. Mandra-pahoviana ny fotoana andefasana anao?
Amin'ny ankapobeny dia 3-5 andro raha tahiry ny entana. na 15-20 andro raha tsy ao anaty tahiry ny entana dia mifanaraka amin'ny habetsany izany.
6. Inona ny fe-potoana fandefasana anao?
EXW, FOB Tianjin na fangatahan'ny mpanjifa hafa